(၃၁-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း - Padaethar
(၃၁-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
August 31, 2020 Padaethar ပြည်တွင်းသတင်း 0
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
(၃၁-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ
၁။ (၃၁-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် –
– အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲ နမူနာ (၉၃၂) ခု၊
– ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၁၈) ခု၊
– ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မန္တလေး) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၆၄) ခု၊
– ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မော်လမြိုင်) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၅၆) ခု၊
– ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၂၃) ခု၊
– ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျောက်ဖြူမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၈) ခု၊
– နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ခုတင် (၁၀၀၀)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၂) ခု၊
– ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မူဆယ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁) ခု၊
– ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ လွိုင်ကော်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁) ခုနှင့်
– ရန်ကုန်မြို့၊ အမှတ် (၁) တပ်မတော်ဆေးရုံကြီး ခုတင် (၁,၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၀၆) ခု၊
– စုစုပေါင်း (၁,၇၄၁) ခု အား ယနေ့၊ ညနေတွင် စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ –
• COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် (၉၅) ဦး တွေ့ရှိရပါသည်။
၂။ (၃၁-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲ အတည်ပြုလူနာ (၈၈၂) ဦးရှိပြီ ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာဟောင်း (old confirmed case) များ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာစစ်ဆေးမှုတွင် (၂) ကြိမ်ဆက်တိုက် ပိုးမတွေ့ရှိသူ (၂)ဦး (Case- 347 နှင့် 376) ရှိသဖြင့် ယနေ့အထိ ရောဂါပိုးကင်းစင်လာသူ စုစုပေါင်း (၃၅၄) ဦးရှိပါသည်။ ၎င်းတို့အနက် (၃၄၇) ဦးအား ဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ သတ်မှတ်နေရာများတွင် အသွား အလာ ဆက်လက်ကန့်သတ်၍ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုလျက်ရှိပါသည်။
၅။ (၃၀-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီမှ (၃၁-၈-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီအတွင်း တွေ့ရှိရသော စောင့်ကြည့်လူနာအသစ် (၆၁) ဦးရှိပါသည်။
၆။ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများပြီးစီးချိန်နှင့် သတင်းထုတ်ပြန်ချိန်အကြား အချိန်တိုတောင်းခြင်းကြောင့် ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ်များ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ပြုစုလျက်ရှိပြီး ပြုစုပြီးစီးပြီးနောက်မှသာ ထပ်မံထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ပါသည်။
#Ministry_of_Health_and_Sports, #MoHS, #COVID19LabResults, #ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်, #ဓာတ်ခွဲအဖြေ
(၃၁-၈-၂၀၂၀) ရကျနေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ
၁။ (၃၁-၈-၂၀၂၀) ရကျနအေ့တှကျ COVID-19 ရောဂါ ဓာတျခှဲစဈဆေးရာတှငျ –
– အမြိုးသားကနျြးမာရေးဓာတျခှဲမှုဆိုငျရာဌာန (ရနျကုနျ) (NHL) မှ (ပထမအသုတျ) ဓာတျခှဲ နမူနာ (၉၃၂) ခု၊
– ဆေးသုတသေနဦးစီးဌာန (DMR)မှ ဓာတျခှဲနမူနာ (၂၁၈) ခု၊
– ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဓာတျခှဲမှုဆိုငျရာဌာန (မန်တလေး) မှ ဓာတျခှဲနမူနာ (၆၄) ခု၊
– ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဓာတျခှဲမှုဆိုငျရာဌာန (မျောလမွိုငျ) မှ ဓာတျခှဲနမူနာ (၂၅၆) ခု၊
– ပွညျသူ့ဆေးရုံကွီး၊ စဈတှမွေို့မှ ဓာတျခှဲနမူနာ (၁၂၃) ခု၊
– ပွညျသူ့ဆေးရုံကွီး၊ ကြောကျဖွူမွို့မှ ဓာတျခှဲနမူနာ (၂၈) ခု၊
– နပွေညျတျော ပွညျသူ့ဆေးရုံကွီး ခုတငျ (၁၀၀၀)မှ ဓာတျခှဲနမူနာ (၁၂) ခု၊
– ပွညျသူ့ဆေးရုံကွီး၊ မူဆယျမွို့မှ ဓာတျခှဲနမူနာ (၁) ခု၊
– ပွညျသူ့ဆေးရုံကွီး၊ လှိုငျကျောမွို့မှ ဓာတျခှဲနမူနာ (၁) ခုနှငျ့
– ရနျကုနျမွို့၊ အမှတျ (၁) တပျမတျောဆေးရုံကွီး ခုတငျ (၁,၀၀၀) မှ ဓာတျခှဲနမူနာ (၁၀၆) ခု၊
– စုစုပေါငျး (၁,၇၄၁) ခု အား ယနေ့၊ ညနတှေငျ စဈဆေးပွီးစီးခဲ့ရာ –
• COVID-19 ရောဂါ ဓာတျခှဲအတညျပွုလူနာသဈ (၉၅) ဦး တှရှေိ့ရပါသညျ။
၂။ (၃၁-၈-၂၀၂၀) ရကျနေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ မွနျမာနိုငျငံတှငျ COVID-19 ရောဂါဓာတျခှဲ အတညျပွုလူနာ (၈၈၂) ဦးရှိပွီ ဖွဈပါသညျ။
၃။ ဓာတျခှဲအတညျပွု လူနာဟောငျး (old confirmed case) မြား၏ ဓာတျခှဲနမူနာစဈဆေးမှုတှငျ (၂) ကွိမျဆကျတိုကျ ပိုးမတှရှေိ့သူ (၂)ဦး (Case- 347 နှငျ့ 376) ရှိသဖွငျ့ ယနအေ့ထိ ရောဂါပိုးကငျးစငျလာသူ စုစုပေါငျး (၃၅၄) ဦးရှိပါသညျ။ ၎င်းငျးတို့အနကျ (၃၄၇) ဦးအား ဆေးရုံမှ ဆငျးခှငျ့ပွုခဲ့ပွီးဖွဈကာ သတျမှတျနရောမြားတှငျ အသှား အလာ ဆကျလကျကနျ့သတျ၍ စောငျ့ကွပျကွညျ့ရှုလကျြရှိပါသညျ။
၄။ ဓာတျခှဲအတညျပွုလူနာမြားအနကျ သဆေုံးသူ (၆)ဦး ရှိပါသညျ။
၅။ (၃၀-၈-၂၀၂၀) ရကျနေ့၊ နလေ့ယျ (၁၂:၀၀) နာရီမှ (၃၁-၈-၂၀၂၀)ရကျနေ့၊ နလေ့ယျ (၁၂:၀၀) နာရီအတှငျး တှရှေိ့ရသော စောငျ့ကွညျ့လူနာအသဈ (၆၁) ဦးရှိပါသညျ။
၆။ ဓာတျခှဲစဈဆေးမှုမြားပွီးစီးခြိနျနှငျ့ သတငျးထုတျပွနျခြိနျအကွား အခြိနျတိုတောငျးခွငျးကွောငျ့ ဓာတျခှဲအတညျပွုလူနာသဈမြား၏ သတငျးအခကျြအလကျမြားကို ပွုစုလကျြရှိပွီး ပွုစုပွီးစီးပွီးနောကျမှသာ ထပျမံထုတျပွနျမညျဖွဈပါသညျ။
#Ministry_of_Health_and_Sports, #MoHS, #COVID19LabResults, #ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ, #ဓာတျခှဲအဖွေ
ရွှေတိဂုံပန်းချီကားနှင့်ပတ်သက်ပြီး မောင်မောင်အေးကတော့ ခုလိုဖြေရှင်းထားပါတယ်
သားညကျရင်ပွဲကြမ်းဖို့ဝယ်ထားတဲ့ ခွေးလျားနက်စေ့တွေ အဖေအကုန်စားလိုက်သောအခါ
PADAETHAR provide celebrity, life style, breaking news, local news and international news. Articles are displayed in text, video and photos. Visitors can read news in articles type of categories in https://padaethar.com/ (example – News, Entertainment, Sport, Health, Celebrities, Media & Music….etc). Hope our visitors enjoy our website.
တာမွေလူနာ (၇၃၆) သည် ရောဂါလက္ခဏာမပြမီ ရက်ပိုင်းအလိုက အိမ်တွင် ဘုန်းကြီးဆွမ်းကပ်၍ အလှူလုပ်ခဲ့
(၁၉)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲမှ တစ်ထောင်ဆု ပေါင်မြို့မှကံထူးရှင်
၁၉)ကြိမ်မြောက် “ထီ “ပေါက်စဉ် အစ / အဆုံး တိုက်လို့ရပါပြီ …
၁၉)ကြိမ်မြောက် “ထီ “ဆုကြီးများ တိုက်​လို့ရပါပြီ …
(၁၉)ကြိမ်မြောက် ထီတိုက်ရိုက် live ကြည့်ရန်